तपाईलाई विश्वास नलाग्न सक्छ : पाँच सय वर्षअघि गा’डिएको श’वबाट अहिले पनि बग्छ रगत ! – Namaste Host
February 3, 2021 Bijay LamaLeaveaComment on तपाईलाई विश्वास नलाग्न सक्छ : पाँच सय वर्षअघि गा’डिएको श’वबाट अहिले पनि बग्छ रगत !
एजेन्सी: पाँच सय वर्ष पहिले निधन भएको कुनै मान्छेको शरीरबाट अहिले पनि रगत आँउछ भन्दा तपाईलाई विश्वास नलाग्न सक्छ । तपाईँले यसलाई अपत्यारिलो कुरा या हावादारी कुरा पनि भन्न सक्नुहुन्छ । तर, अर्जेन्टिनामा एउटा त्यस्तै घटना भएको छ । जुन सुन्नासाथ जोकोहीले पत्याउनै सक्दैनन् । सन् १९९९ मा वैज्ञानिकको टोलीले अर्जेन्टिनामा ज्वालामुखीले १५ वर्षकी एक युवतीका श व फेला परेको थियो । उनीहरुले त्यो श व भेटनासाथ गरिएको परीक्षणले त्यो श व पाँच सय वर्ष पहिलै नै गाडेको पुष्टि भएको थियो ।
तर, जहाँबाट उनको श व निकालियो, त्यहाँ हेर्दा लाग्थ्यो त्यो शव केही दिनअघि मात्र गाडिएको हो । गाडिएको ठाँउको तापक्रम धेरै कम भएका कारण उनको शरीर, कपाल उनको अनुहार सबै नसडी सामान्य अवस्थामा थियो । उनलाई गाडेको ठाँउमा उनको शरीर कपडा मात्र नभएर केही मात्रामा सुन र चाँदीपनि भेटिएको थियो । जब उनको शरीर जाँच गरियो तब उनको शरिरमा रगत भेटिएको थियो ।
डाक्टरका अनुसार उनको रगतमा क्षयरोगको संक्रमण पनि देखिएको थियो । यो कुराले सबैलाई अचम्मित बनाएको छ । निधन भएको पाँच सय वर्षपछि उनको शरीरमा टिबीको संक्रमण कसरी कायमै रह्यो भन्ने कुराले चिकित्सकलाई पनि अचम्मित पारेको छ । यसलाई लिएर अहिले पनि उनको रगतको परीक्षण भइरहेको छ । परीक्षणका क्रममा रगतमा क्षयरोग (टिबी) को संक्रमण भएको पाइएपछि पाँच सय वर्षसम्म मृ त शरीरमा टिबीको जीवाणु जीवित रहनुको कारण चिकित्सकको टोलीले खोजिरहेको छ ।
शोधकर्ताहरुका अनुसार यसभन्दाअघि कुनै पनि मृ त शरीरमा यस किसिमका ब्याक्टेरिया भेटिएका थिएनन् । ती किशोरीको शरीर सयौँ सालौँपछि पनि यति राम्रो अवस्थामा भेटिएको छ । उनको कपालसम्म पनि नझरेको अवस्थामा भेटिएको छ । यी किशोरीको शरीरले कयौँ रहस्य खोल्ने अपेक्षा गरिएको छ । चिकितस्कहरुले अहिले ती किशोरीको टिबीका ब्याक्टेरिया रहेको रगतको जाँच गरिरहेका छन् । जसबाट चिकित्सकहरुले कयौँ रोगको उपचार विधि पनि पत्ता लाग्ने आशा गरेका छन् ।
निधन भएको पाँच सय वर्षपछि उनको शरीरमा टिबीको संक्रमण कसरी कायमै रह्यो भन्ने कुराले चिकित्सकलाई पनि अचम्मित त पार्यो त्यसमाथि अहिले पनि उनको रगतकाे परिक्षण गर्न मिल्ने र गरिएकाे समेत कुरा समाचारमा आएपछि सँसार नै चकित परिरहेकाे अवस्था छ । यो कुराले सबैलाई अचम्मित बनाएको छ । निधन भएको पाँच सय वर्षपछि उनको शरीरमा टिबीको संक्रमण कसरी कायमै रह्यो भन्ने कुरामा आश्चर्यचकित छन् ।